बिहीवार यसरी गर्नुहोस् भगवान बिष्णुको पूजा मिल्नेछ शुभ लाभ (पूजा विधिसहित) - Nawalpur Dainik
कसरी पूजा गर्ने ? पूजा विधि:बिहान स्नानपछि पहेलो वस्त्र धारण गर्ने । त्यसपछि पहेलो फूल र चन्दनलाई एक साथ मिलाएर प्रसाद बनाउने । यस प्रसादलाई भगवानलाई अर्पण गरेर पूजा गरौँ । यसबाट भगवान विष्णु प्रसन्न भएर उहाँको आर्शिवाद तपाईंको घरमा सधैँ भइरहने छ ।
Prevकुन दिन कुन देवीदेवता को पूजा गर्नु उपयुक्त मानिन्छ !!